अब पहाडमै हाडजोर्नीको शल्यक्रिया सेवा « Mechipost.com
अब पहाडमै हाडजोर्नीको शल्यक्रिया सेवा
प्रकाशित मिति: १० चैत्र २०७७, मंगलवार ०८:३०
पाँचथर, १० चैत । पूर्वी पहाडमा पहिलो पटक हाडजोर्नीको शल्यक्रिया सेवा सुरु भएको छ ।
फिदिममा दुई वर्ष अघिबाट सञ्चालनमा आएको समर्पित अस्पतालले हाडजोर्नीको शल्यक्रिया सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । उक्त अस्पतालमा हाडजोर्नी, नशा तथा बाथरोगका विशेषज्ञ चिकित्सक डा. देउमान लिम्बूले सेवा दिन थालेपछि अस्पतालले यससम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यसै साताबाट सञ्चालनमा आएको हाडजोर्नीको शल्यक्रिया सेवाबाट हालसम्म तीन जना विरामीले सेवा लिइसकेको अस्पतालले जनाएको छ ।
हालसम्म पूर्वी पहाडका जिल्लाहरुमा हाडजोर्नीको शल्यक्रिया सेवाको अभाव थियो । जसकारण यससम्बन्धी स–साना समस्याहरुको उपचार गर्न समेत झापा, मोरङ तथा सुनसरीका विभिन्न अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता थियो । नियमित चेकजाँच गराउनुपर्ने, हड्डिमा राखिएको स्टिल तथा रड झिक्नुपर्ने तथा ‘डे«सिङ’ गराउनुपर्ने विरामीहरु महङ्गो शुल्क तिरेर बाहिर बस्न बाध्य थिए ।
यहि समस्यालाई मध्यनजर राखेर उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको अस्पतालका सञ्चालक राजेन्द्र कार्कीले वताउनुभयो । विशेषज्ञ चिकित्सकका अतिरिक्त उक्त अस्पतालले करीब रु. १८ लाख लागतमा अत्यधुनिक सेवा प्रदान गर्ने ‘सीआर्म मेसिन’ जडान गरेको छ ।
यहाँबाट पूर्वी पहाडका सेवाग्राहीलाई सेवा दिन आउनुभएका डा. देउमान लिम्बूले हाडजोर्नीका ६० प्रतिशत समस्याहरु समाधान गर्न आफूहरु सफल हुने वताउनुभयो । हाड र जोर्नीहरु भाँचिएको, टुटेको, फुटेकोको शल्यक्रियामार्फत उपचार गर्ने, स्टिल राख्ने तथा झिक्ने, जोर्नीहरुसम्बन्धी समस्याको उपचार गरिने डा. लिम्बूले वताउनुभयो ।
उक्त अस्पतालले तराईका अस्पतालहरुको तुलनामा ५० प्रतिशत कम शुल्कमा उपचार गर्ने दाबी समेत गरेको छ । “हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको यहाँका विरामीहरुलाई यहिँ सेवा प्रदान गर्नु हो”, डा. लिम्बूले भन्नुभयो, “यसैले हामी कम शुल्कमा विरामीलाईसेवा दिन चाहन्छौँ ।”
यहाँ यस अघिसम्म भाँचिएको, टुटेको, फुटेको लगायत हाडजोर्नीसम्बन्धी कुनै पनि सेवा सञ्चालनमा थिएनन् । जसकारण दुर्घटनामा पर्नेहरुलाई न्यूनतम पाँच घण्टाको यात्रापछि तराईका जिल्लाहरुमा लगेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
हाडजोर्नीसम्बन्धी सेवा दिने सरकारी अस्पताल पूर्वमा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान मात्रै हो । पूर्वी पहाडका ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, इलाम लगायत जिल्लाका विरामीहरुलाई यहाँसम्म पु¥याउन कम्तिमा आठ घण्टा समय लाग्छ ।
जसकारण भाँचिएको, टुटेको, फुटेको हड्डि राम्रोसँग नजोडिने, नियमित सेवा तथा परामर्शका लागि महङ्गो शुल्क तिरेर होटेलमा बस्नुपर्ने जस्ता समस्याहरु थिए । उक्त अस्पतालले फिदिममै हाडजोर्नीको शल्यक्रिया सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि पाँचथर सहित इलाम, तेह्रथुम र ताप्लेजुङका विरामीले सेवा लिन सक्ने भएका छन् ।
घरमै हिँड्ने क्रममा लडेर कुर्कुच्चाको हड्डि फुटेपछि उपचारका लागि आउनुभएका फिदिम नगरपालिका–५ का रविन तुम्बापोले फिदिममै शल्यक्रिया सेवा पाउँदा खुशी लागेको वताउनुभयो । “एम्बुलेन्सलाई कम्तिमा आठ हजार भाडा तिरेर झापा पुग्नुपथ्र्यो”, तुम्बापोले भन्नुभयो, “अपरेसनपछि डे«सिङ गराउन झापामै बस्नुपथ्र्यो । फिदिममै उपचार पाउँदा एकदमै खुशी छु ।”
विशेषत दुर्घटनाका घाइतेहरुको समयमा उपचार हुन नसक्दा हड्डि राम्रोसँग नजोडिने, बाङ्गो जोडिने तथा कतिपयलाई समयमा अस्पताल पु¥याउन नसक्दा मृत्यु नै हुने गरेको थियो । २५ शैय्याको उक्त अस्पतालले सेवाहरु क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने जनाएको छ ।